Akwụkwọ akụkọ German - Akụkọ gbasara ụmụaka na ụda kpakpando na oge
Home Tags Ụdị egwuregwu German
Nkume: Ụdị edemede nke German
Nabata na ihe omume German anyị na-eto eto na nwata. N'ebe a, anyị emeela ka ndị na-agụ akwụkwọ nwee ike ị nweta ma ugbu a ma kpochapụ egwu German Football Stars nke kpochapụwo ndị mara mma egwuregwu egwuregwu.
O doro anya na Germany emeela ka bọlbụ na ndị agbụrụ ya nwere mpako. Ndị ọrụ ya ugbu a na ndị kpochapụwo ya kwesiri ịbụ ndị na-agba ọsọ na Football Brochure of Fame.
Editọ LifeBogger - Bọchị agbanweela: Septemba 3, 2020 0
Ihe omuma anyi nke Hansi-Dieter Flick na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya, umuaka ya, net Worte ya, ndu ya na ndu mmadu. Naanị ...